> Resource > iPod > nidaameed iPod / iPhone / iPad la Your Home Office iyo Computer
Syncing iPod / iPhone / iPad in computer ah waxaa laga yaabaa in fud, laakiin waa gebi ahaanba wax kale si hagaagsan iPhone / iPod / iPad kombiyuutaro badan. Ugu yaraan waxaad la kulmi doontaa sida fariin digniin ah u xun,
Fariintii ugu Digniin Big
Fariin digniin Tani waxay u muuqataa, maxaa yeelay, aad isticmaalayso Automatic Mode. Guud ahaan, heesaha cusub ee aad ku daray in Lugood lagu wareejin lahaa in qalabka iyo heesaha aad saaray in Lugood sidoo kale laga saari lahaa qalabka. Kombiyuutarka in noocan oo kale ah Lugood caasimadii waa iPod / iPhone / iPad ee " computer guriga ". Markaas marka aad qalab aad ku xidhmaan computer ka duwan, sanduuq ah oo heegan kor ku tusi doona sida kor ku xusan.
Cancel : waxba ma samayn, laakiin sii maktabadda music ku saabsan qalab aad.
Masixi iyo nidaameed , Waxaad samaysataa computer cusub oo ay joogaan "," computer. Lugood tirtiri doonaa maktabadda music on qalab aad, ka dibna nuqul gabayadii iyo playlists ka computer cusub guriga si ay u qalab aad.
Bedelka Iibsasho : Haddii computer cusub ayaa la sameeyey la xisaabtaada Lugood Store oo oggolaaday, aad iibsadaan Lugood Store aad ka qalab si aad u computer cusub ku wareejin karaa.
Solutions si hagaagsan iPod / iPhone / iPad la computer Multiple
Sidaas waxa xalka u hagaagsan iPod / iPhone / iPad la kombiyuutarada badan? Waxaa jira laba xal sida hoos.
Xalka 1. Change Automatic Mode buugii Mode
Kala duwan ka Lugood Automatic Mode, Buugga Mode kuu ogolaanayaa inaad xajisaan heeso iyo playlist on qalab aad , laakiin ku darto heeso dheeri ah ama playlists maktabadda music ku saabsan kombiyuutarada badan. Dooro Cancel in fariinta digniinta weyn iyo raac tilmaamaha si ay awood Mode Buugga in Lugood.
1. Open Lugood dooro qalab hoos Qalabka dhinaca bidix.
2. Click ka Kooban tab.
3. Hubi Gacanta maamuli music iyo videos si ay u gudato.
4. Riix OK si loo xaqiijiyo iyo guji codso.
5. qabtay. Hadda waxaad jiidi karaan music iyo videos ka Lugood in icon qalab galeeysid ah.
Fiiro gaar ah: shaandheeyn lagu iPod waxaa loogu tala galay in lagu isticmaalo computer hal. Waxaad ma music ka kombiyuutarada badan ama maktabadaha Lugood duwan tahay inuu isku shaandheyn iPod wareejin karaan.
Xalka 2. nidaameed iPhone / iPod / iPad in computer badan oo leh qalab xisbiga saddexaad
Lugood sokow, waxaa jira qalab xisbiga saddexaad, taas oo ay gaaraan kartaa gool. Waxa loo magacaabay TunesGo Wondershare (dadka isticmaala Windows). Users Mac noqon in ay TunesGo Wondershare (Mac) . Si ka duwan Lugood, qalab awood aad si hagaagsan aad iPod, iPhone iyo iPad kombiyuutaro badan oo Lugood si fudud. Waxa muhiimka ah waa in aan marnaba tirtirto hadda music, video iyo in ka badan oo ku saabsan, iPod ah iPhone iyo iPad marka la computer badan syncing.
Fiiro gaar ah: Waqtiga xaadirka ah, version Windows uu leeyahay shaqo badan Mac ka mid ah. Waxaa u hagaagsan karo xiriirada iyo maarayn SMS on your iPad, iPod iPhone ama, taas oo aanu version Mac ka taageeraan aan in muddo ah. Halkan, waxaan jeclaan lahaa in uu ku tuso xalka la version Windows ah.
Tallaabada 1. Ku rakib qalabka ku kombiyuutar kasta
Hadda, rakibi oo ay maamulaan qalab kombuutarka. Connect aad xogta iPad, iPod ama iPhone la cable USB ah. Ka dib markii in, uu furmo suuqa hoose ka soo bixi, oo muujinaya xogta ku saabsan iPhone, iPad iyo iPod ku yaal.
Tallaabada 2. nidaameed iPhone / iPod / iPad la kombiyuutarada badan
Kaalay column ka tegey, oo aad ka arki kartaa Media , playlist , Xiriirada , Photos tab. Riix tab kasta si ay u muujiyaan suuqa kala maamulka ay. Markaas, guji Add ama Import / Dhoofinta in aad ku darto files u dhiganta oo ka computer kasta oo aad iPhone, iPad ama iPod.
By gujinaya playlist > dar > Import Lugood playlist , in aad aad iPhone, iPad iPod ama u hagaagsan karaa Lugood playlist la xafidaada ka playlists hadda.
Haddii aad rabto in aad u hagaagsan computer kale, kaliya aad u rakibi qalab this on computer kale oo sameeyo hab la mid ah. Waa arrin ammaan ah. Ma aha in aad ka walwasho khasaaro xogta qudhaanjada.